Beesha Caalamka oo "aan ictiraafi doonin natiijada doorashada Galmudug"
Beesha Caalamka oo "aan ictiraafi doonin" doorashada Galmudug
MUQDISHO, Soomaaliya – Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay mushkilada doorashada Galmudug ayaa sheegay in Beesha Caalamka "aysan ictiraafi doonin" natiijo kasta oo soo baxda.
Hogaamiyaha xisbiga Wadajir oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa ku baaqay in "gacanta laga qabto" xukuumada oo "waddo qardajeexa ku wada" hanaanka coddeynta.
Hadalkaan ayaa kusoo beegmaya iyaddoo maamulku qarka u saaran yahay in uu yeesho hogaan kala duwan maadaama ay jiraan guddiyo doorasho oo kala taabacsan Xaaf, Ahlu Sunna iyo Villa Somalia.
Hoos ka akhriso qoraalka siyaasiga
Madaxda Dowladda Federaalka ee haatan joogta ma aysan fara gashan doorashadii Galmudug ka dhacday bishii Maarso 2017-kii ee lagu doortay madaxweyne Xaaf. Sidaas darteed doorashadaas haba yaraatee wax qalqal, is qabqabsi iyo xasillooni darri ah kama dhalan.
Maantase way ka duwan tahay oo waxay soo magacawday guddi farsamo oo shaqaalaha rayidka dowladda ka tirsan, waxay odayaashii dhaqanka ka dhaceen magacaabistii xildhibaannada , iyagoo xildhibaan kasta damiin uu ka yahay ruux dowladda u shaqeeya oo xilkiisa waynaya haddii Xildhibaankiisu la kulmo amaba u codeeyo musharraxa aan ahayn kan dowlada wadato.
Waxay afduubeen guddigii doorshada Galmudug. Markii la waayey cid is diiwaan gelisa, waxay keeneen nin hal maalin aan musharraxnimo sheeganin, balse ka tirsanaa ololaha doorashada musharraxa dowladda.
Waxaa diiday musharraxiintii, odyaashii, Ahlusunna, Gudiga uu Prof Shirwac hoggaamiyo oo ay beesha xilka ku tartmaysa ka soo jeedaan. Ugu danbayntiina Beesha Caalamka ayaa qaylo dhaan afka yeertay.
Waxaan waydiinayaa reer Galmudug xaggey joogtaa dowladda maamul u dhisaysa Galmudug? Haddiise maamulka haatan la dhisayo dul saar ku noqdo hoggaanka dowladda ee haatan jira, sanad ka dib yaa bixinaya? mise sidii madaxweynihii hore ee Galmudug ayuu is casilayaa haddii doorshada federaalka saaxiibkiis looga guulaysto.
Waxaan u baahannahay Galmudug aan cillin ahayn, cidna dul saar ku ahayn. Yaan lagu daalin doorasho loo qabanayo musharrax iyo malxiiskiis oo ay saamilaydii siyaasadeed ee Galmudug si aan kala har lahayn u qaaddaceen, beesha caalamkana sheegeen in aysan ictiraafi doonin natiijadeeda maadamaa aan loo dhammeyn, la iskuna raacsanayn.
Cidii Galmudug u naxaysa qolada wadada qardajeexa ku wada gacanta ha qabtaan.
Gawaarida oo ku safraysay duleedka Cadaado ayaa la kulmay weerar gaadmo ah...
Jahwareerka Galmudug oo dagaal dhiig ku daatey lagu soo afjaray
Soomaliya 29.02.2020. 14:10
Soomaliya 14.02.2020. 13:35
Xaaf oo ayiday go'aanka Ahlu sunna iyo murashaxiinta ee doorashada
Soomaliya 23.01.2020. 02:53
Baarlamaanka cusub ee Galmudug oo yeeshay guddoon ku meel gaar ah
Soomaliya 12.01.2020. 13:16
Galmudug oo qarka u saaran in ay yeelato laba madaxweyne
Soomaliya 04.01.2020. 05:39